O nwere mgbe ihe siiri Esaf ike. Ọ hụrụ ka ndị niile gbara ya gburugburu na-emebi iwu Chineke, ya adị ya ka o nweghị ihe na-eme ha! N’ihi ya, Esaf malitere iche na ọ baghị uru ịgbalịwa ime ihe dị Chineke mma. O kwuru, sị: “N’ezie, ọ bụ n’efu ka m meworo ka obi m dị ọcha, kwọọkwa aka m iji gosi na aka m dị ọcha.” Ma mgbe Esaf chesiri echiche ike, ọ gbanwere obi ya. Ọ ghọtara na obi ụtọ ọ bụla ha nwere anaghị adịte aka. Gịnị ka Esaf mechara kwuo? Ọ bụkuru Jehova abụ, sị: “Ọ dịghị ihe ọzọ na-enye m obi ụtọ n’ụwa ma e wezụga gị.”—Abụ Ọma 73:3, 13, 16, 25, 27.
Ma eleghị anya, i cheela mgbe ụfọdụ na ọ baghị uru ime ihe Chineke kwuru. Ma, mee ihe Esaf mere, leruo anya ala. Chee echiche banyere ọnọdụ ndị mebiri iwu Jehova. Hà nwere udo n’ezie? Ò meela ka ha nwee obi ụtọ nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi n’ebe Chineke nọ na-enweghị? Ọ bụrụ na i chebara ya echiche nke ọma, o doro anya na ọ ga-emetụ gị n’obi ikwu ihe Esaf kwuru. Ọ sịrị: “Ịbịaru Chineke nso dị m mma.”—Abụ Ọma 73:28.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Onye M Ga-eṅomi—Esaf
yp2 p. 287